Shot Copper / Copper Goo Wire Shot - Shiinaha Shanghai Bosun sugi lahaayeen
Shot Copper lagu sameeyey habka of kursiga keydka isku aadka, goynta iyo qaboojiyaha iwm .. iyo muuqaalka kore ee dahabka-dhalaalka iyo kuul spherical. Oo iyana waxay tahay inta badan loo isticmaalaa qiraan, xoojinta,-nalalka sub iyo xardhey dusha ku filtarka, rakiban qalabka iyo demarcations iwm
shirkadda Our qaadi kartaa baakadaha-xidhkii bac, baakadaha bacda ton, baakadaha saxaarad alwaax, baakadaha xirxirida caag ah oo u eg sida ay shuruudaha macaamiisha.
Cut Copper shot
Qaab dhismeedka Mettallographical
1. Wixii nadiifinta steel cusub iyo wax duug dusha dibadda, descaling, la xoojiyo
2. Sida wadar ahaan labada lug ay xirtaan u adkaysta sagxadda dhulka ah, marmarka sagxada adag la samayn karaa for square ah, garaashyada iyo kuwa kale ee aan warqada dabaqa
3. ciid miisaan, sida sida dhirta cement.
4. Iyadoo ka dib markii processing wanaagsan, ku haboon oo dhan cayn kasta oo lagu buufiyo denim iyo buufin isticmaalka more casri ah.
5. Qoraalkani wuxuu ku sugi lahaayeen (ciid, warqad ka sugi lahaayeen adag, xoqo, maro Emery)
hadal haynta engeeg Media
hadal haynta Sandblasting
bismuth shot Waayo, Sale
Copper Goo Wire shot
engeeg Shot Copper
ahama Steel Shot